Ingabe iminti inyuka noma yehlise ingcindezi yomuntu? > Ingcindezi
Ingabe iminti inyuka noma yehlise ingcindezi? I-Peppermint: izinzuzo nokulimaza
Iminti ivame ukusetshenziswa emithini yesintu njenge-antiseptic. Ingabe i-peppermint idambisa ingcindezi futhi ilungele iziguli ezinomfutho wegazi?
Iphunga, ukunambitheka, imifino ekhanyayo, amavithamini amaningi kanye namaminerali we-mint akhuthaza abagcini be-cosmetologists kanye nochwepheshe be-Culinary. Phakathi kwamakhambi okwelapha, kuthatha enye yezindawo ezihloniphekile. Izici ze-antiseptic ne-analgesic zalesi sitshalo bezisetshenziswa kusukela ezikhathini zasendulo ezindleleni zokupheka zemithi yendabuko.
Kwandisa noma kwehlisa ingcindezi
Ngabe imint ithinta kanjani umfutho wegazi? Ucwaningo oluningi lwabachwepheshe kanye nokuhlangenwe nakho kwabantu abahlaselwa umfutho wegazi ophezulu kwenza ukuba bakwazi ukuphikisana nokuthi lo muthi ngempela unempahla yokwehlisa umfutho wegazi.
I-Menthol, equkethwe amaqabunga alesi sitshalo, ivuselela futhi inciphise izicubu zomhlaba, ikhulula ukuvuvukala.
Ngaphansi kwesenzo se-menthol, izitsha ziyanda futhi, ngenxa yalokho, kukhona ukwehla komfutho wegazi. Umuthi oyingqayizivele uyingxenye yezidakamizwa ezinjalo ze-vasodilator njenge-halvol ne-valocordin. Le mishanguzo idambisa ama-vasospasms, ithambisa izinhliziyo zenhliziyo, futhi inciphise nomfutho wegazi ngempumelelo.
Yini indlela engcono yokuthatha i-peppermint kwiziguli ezinesifo segazi?
Itiye le-Peppermint akuyona nje isiphuzo esiphundu nesinempilo. Futhi kuyindlela elula yokunciphisa ingcindezi.
Ukwenza itiye lokupholisa, kwanele ukuphuza amaqabunga amabili noma amathathu wotshani obusha engilazini yamanzi abilayo. Enye inketho isipuni sikamatende owomile, othengwe ekhemisi, futhi uphuze nengilazi yamanzi abilayo.
Isiphuzo kufanele sithathwe ngemikhawu ye-hypertension. Njengesilinganiso sokuvimbela, itiye lingadakwa amasonto amabili isigamu senkomishi ekudleni kwasemini nakusihlwa. Isiphuzo esimnandi se-mint sobusuku ngokufakwa kwesipuni soju kuwukuqinisekiswa kokulala okujulile nokuzolile.
I-Peppermint isitolo esiyingqayizivele samavithamini namaminerali.
Ngenxa yokwakheka okunjalo okuhle, isitshalo sokwelapha siyakwazi:
ukusungula ukuhamba kwegazi
yehlisa ukushisa kwenhliziyo nge-acidity eyengeziwe yejusi yesisu
Kwabaningi, i-peppermint isiza ukudambisa ikhanda. Isitshalo sisetshenziselwa ukwelapha ukubanda nezifo zepheshana lokuphefumula elingaphezulu. Kwezinye izimo, linganciphisa kancane izinga lokushisa lomzimba.
Njenganoma yisiphi esinye isitshalo sokwelapha, i-mint ine-contraindication yayo:
Ikhono le-mint ukufaka imithambo yegazi likubeka ezintweni eziningi eziphikisana nabantu abanomfutho wegazi ophansi.
Ubuhlungu bekhanda obubangelwa ukwehlisa umfutho wegazi awunakususwa ngetiye. I-Mint iyakwazi ngempela ukuqeda ikhanda, kepha kuphela uma idalwa yimithambo yemithambo yegazi. Kwezinye izimo, impilo izodlondlobala.
Ukomelela okuqhubekayo - isimo lapho kufanele ungaphuzi itiye le-peppermint. Kuyasiza ekuphumuleni okwengeziwe nasekulaleni okuphumuzayo. Kulezi zimo, kungcono ukuthatha iziphuzo ngomphumela we-tonic.
Isikhathi sokuncelisa ibele akusona isikhathi esihle sokuhlolwa kweziphuzo zomuthi.
Isiphuzo se-mint si-contraindised abashayeli nabantu abasebenza ngamasu ayinkimbinkimbi, ngoba anciphisa futhi anciphise ukugxila.
Awukwazi ukuthatha imint ngokungabekezeleli menthol.
I-Mint itiye namathebulethi e-menthol afakwa ezinganeni ezingaphansi kweminyaka emithathu ubudala. Uma ingane ingalali kahle, ungabeka izitsha ngamanzi eduze kombhede, lapho kufakwe khona amaconsi ambalwa kawoyela obalulekile we-peppermint.
Isitshalo esingafani nalutho siyasiza noma siba sibi kakhulu, singabalwa kuphela ngokusemandleni. Kuthinta umuntu ngamunye ngezindlela ezihlukile. Kodwa iqiniso lokuthi i-mint lowers ingcindezi iqiniso. Mhlawumbe ukwehla kwayo ngemuva kokusetshenziswa akuyona into engabalulekile, kepha ukusetshenziswa njalo kwesiphuzo sakho esithandekayo nge-mint kuzosiza kuphela umfutho wegazi ophezulu.
UKUFUNA UMDwebo WAKHO KUDINGA
Lesi sitshalo sithatha indawo eyodwa yezindawo zokuqala phakathi kwamakhambi okwelapha. Abantu abaningi banesithakazelo: ingabe i-mint iyanda noma inciphisa ukucindezela? Ngaphambi kokuphendula lo mbuzo, kufanele uqonde ukuthi siyini lesi sitshalo.
I-Mint ihlukaniswa yiphunga layo, abantu abaningi abalithandayo. Kusetshenziswe isikhathi eside kakhulu ekuphekeni, embonini nakwezokwelapha. Kunezinhlobo eziningi zezinhlobonhlobo zalesi sitshalo: upelepele, amanzi, onamakha, amaJapane, insimu, njll. Zonke lezi zinhlobo zinephunga elimangalisayo futhi ziqukethe i-menthol. I-Peppermint ibonwa njengephunga elihle kakhulu, ngakho-ke ithandwa kakhulu. Leli siko lavunwa ngumuntu, ngakho-ke alikwazi ukutholakala endle. Wathola isicelo sakhe ku-Culinary, umuthi, amakha kanye ne-cosmetology.
I-mint yaseJapan nayo ithandwa kakhulu ngama-cosmetologists. Amafutha ayo abalulekile asetshenziselwa ukwenza ama-shampoos, okhilimu, ama-lotion, neminye imikhiqizo yokunakekela izinwele nezinsimbi yomzimba. Indlela edume kakhulu yokusebenzisa lo mbiza wokwenza imikhiqizo yokunakekelwa ngomlomo isuselwa kuyo, konke kubonga nge-menthol aroma. E-Russia, ipeppermint yayisetshenziswa kubhavu, imishanelo evuthayo emanzini amnandi. Futhi-ke, isitshalo esinjalo sisetshenziselwe izinjongo zokwelapha amakhulu eminyaka, njengoba sinezakhiwo eziningi ezizuzisayo. Nayi imbiza - ipeppermint, imihlomulo nokulimazeka kwayo okuzoxoxwa ngakho ngezansi.
I-Peppermint ne-Pressure yegazi
I-Menthol iyakwazi ukunika umphumela we-tonic futhi wokuphumula, futhi amalungiselelo enziwe ngesisekelo sawo anezimpawu zokulwa nokuvuvukala. Ngaphezu kwalokho, kuthinta kahle uhlelo lwangaphakathi lwezinzwa. Ngakho-ke ingabe iminti inyuka noma yehlise ingcindezi? Iyasiza ekwehliseni kwayo, ngakho-ke, nge-hypotension, kumele ithathwe ngokuqapha.
I-Menthol igxilisa imithambo yegazi, isiza umfutho wegazi ophakeme wehle. Kufanele kukhunjulwe ukuthi le nto iyingxenye yezidakamizwa ze-vasodilator ezinjengeValidol neValocordin. Ngenxa yabo, imisipha yemithambo yobuchopho iyasuswa futhi nomsebenzi wenhliziyo uyathuthuka.
Imiphumela ye-mint enhliziyweni
I-Peppermint ayithinti ingcindezi hhayi ngohlelo lwe-vascular kuphela, kepha futhi nemiphumela enhliziyweni, lapho izinga lokushaya kwenhliziyo lehla, umfutho wehla. Kuyasiza ekwehliseni imvamisa ngokweqile kwenhliziyo (tachycardia), lokhu, kuthinta nomfutho wegazi.
Nge-tachycardia ne-arrhythmias, lesi sitshalo sikuvumela ukuba uvumelanise isigqi senhliziyo, sona, esithinta ingcindezi, siqede ukuguquguquka kwalo, futhi sisize ukuqina. Endleleni, lokhu kunomthelela omuhle ekunikezelweni kwegazi kuya ebuchosheni, kwezinye izimo kuqeda ikhanda.
Isimo esiyinhloko se-mint ngamafutha abalulekile we-menthol. I-Menthol isetshenziswa kaningi kwezokwelapha ukukhwehlela, i-rheumatism, kanye nezinye izinhlobo zokungezwani komzimba.
Izakhi ezilandelayo nazo ziyingxenye yeminti:
Ama-Flavonoids, angamavithamini eqembu P, aklanyelwe ukuqinisa izindonga zemithambo yegazi nama-capillaries, ukuthuthukisa ukuqina kwawo nokuqina kwawo. Ngaphezu kwalokho, ama-flavonoid avimbela ukwakheka kwama-cholesterol plaque. Futhi, lezi zinto ziyi-antioxidant yemvelo enamandla. Ngokushoda kwabo, ukukhubazeka kwemithambo yegazi kuyakhuphuka, okuholela ekwakhiweni kokulimazeka okungama-subcutaneous (hematomas).
Ama-Organic acid asiza ukuthuthukisa ukugaya. Nge-acidity encishisiwe yesisu, adingeka kakhulu umzimba ukubhekana nokuqhutshwa kokudla.
Ama-Tannins anezindawo ezi-he hectatic and anti-inflammatory.
Amaminerali akha i-peppermint athuthukisa izinqubo ze-metabolic emzimbeni futhi andise ukungatheleleki komzimba.
Iziguli ezingena-hypertensive kanye neziguli ezinama-hypotensive zivame ukuba nentshisekelo kumbuzo wokuthi i-mint ithinta kanjani ingcindezi.
I-Menthol, okuyisakhi esiyinhloko sesitshalo, inomphumela we-vasodilating, ngakho-ke iminti yehlisa umfutho wegazi. Iziguli ze-Hypotonic ziyanconywa ukuthi zisebenzise kabi ukusetshenziswa kwemikhiqizo esekelwe kulo mkhambi. Kodwa ama-hypertensives angafaka futhi kufanele afake i-mint ekudleni kwawo.
I-Peppermint itiye ikhonjiswa kubantu abanomfutho wegazi ophakeme, ikakhulukazi lapho kushisa kakhulu. Ukuyilungiselela, udinga isipuni samaqabunga omisiwe noma amasha asikiwe kanye nengilazi yamanzi abilayo. Bayeke baphuke imizuzu eyishumi nanhlanu, emva kwalokho sebekulungele ukuphuza. Ungangeza uju omncane nocezu lukalamusi ukuze uthuthukise izimfanelo ezinempilo nezinambithekayo. Awukwazi ukuphuza izinkomishi ezingaphezu kwezingu-2 ngosuku.
Umfutho we-Hypertension Mint
Njengendlela yokwelashwa eyengeziwe yomfutho wegazi ophakeme, kunconyelwa ukusebenzisa ama-decoctions asuselwa ku-mint.
Siphakamisa ukuthi uzijwayeze nalezi zokupheka ezilandelayo:
Ithisipuni le-mint ne-chamomile lixubaniswa nengxenye yesipuni se-valerian. Ingxube ithululelwa engilazini yamanzi abilayo. Ungathatha okungenani kathathu ngosuku engilazini, ngaphambi kokudla. Inkambo yokwelashwa yinyanga eyodwa.
I-Mint, i-adonis, i-astragalus ne-oregano ithathwa ngokulingana okulinganayo futhi kuxutshwe. Ukusuka kuqoqo, uzodinga isipuni esisodwa semithi yokwelapha. Atsalwa ngesigamu selitha lamanzi abilayo. Ngemuva kwengxenye yehora, umkhiqizo ungahlungwa futhi uthathe ngaphambi kokudla, uhhafu wengilazi kathathu ngosuku.
Isigamu sezipuni ze-clove sihlanganiswa ne-isipuni se-mint. Govuza ingilazi yamanzi ashisayo. Ngemuva kwengxenye yehora, umkhiqizo uyahlungwa futhi udliwa engxenyeni yengilazi kathathu ngaphambi kokudla. Yamukelwe umfutho wegazi ophakeme amasonto amane.
Ingxenye yengilazi yezithelo zomvini ezihlanganiswe nenani elilinganayo le-mint bese upheka ukushisa okulinganiselwe imizuzu emi-5. Ngemuva kwalokho ithuluzi livunyelwe ukuhambisa ngokwalo cishe isigamu sehora. Thatha inkomishi yekota kathathu ngaphambi kokudla.
Amajikijolo omisiwe e-viburnum (isigamu seglasi) ahlanganiswa nesipuni se-mint. Izithako zithululelwa ilitha lamanzi abilayo, zibekwe esitsheni esingenamuntu bese zisethelwa ukubilisa ngaphezulu kokushisa okuphansi imizuzu emihlanu. Ngemuva kokuthi umhluzi selehlile, uyahlungwa bese kuthathwa isipuni soju kulo. Thatha umuthi engilazini yengilazi ngaphambi kokudla kathathu ngosuku.
Isipuni samajikijolo asolwandle asikiwe axubekile exutshwe nenani elifanayo le-peppermint. Izakhi zithanjiswe ngesigamu selitha lamanzi abilayo futhi zivunyelwe ukukunika isigamu sehora. Phuza isiphuzo engilazini ngaphambi kokudla kathathu ngosuku. Ukwelashwa kwenziwa amasonto amane. Ngemuva kwamaviki amabili, ukwamukela kungaqhubeka.
Isipuni samaqabunga ama-currant sihlanganiswa ne-mint ngesilinganiso esifanayo. Thela izakhi ngezibuko ezimbili zamanzi abilayo. Ngemuva kwemizuzu engu-15, umhluzi ungathathwa. Phuza isigamu sehora ngaphambi kokudla, kaningana ngosuku.
Hlanganisa i-hawthorn, i-adonis, i-peppermint ne-mamawort. Umuthi ngamunye uthathwa isipuni. Eqoqweni eliphelele litholile, uzodinga isipuni esisodwa, esigcwele 300 ml. amanzi abilayo. Umkhiqizo uvunyelwe ukuma isigamu sehora, bese uhlungwa. Phuza isigamu sengilazi ngaphambi noma ngesikhathi sokudla, kathathu.
IHawthorn, i-valerian, i-mamawort ne-mint zixubene izingxenye ezilinganayo. Isipuni sengxube ephumayo sithululelwa ku-300 ml wamanzi abilayo. Ngemuva kwengxenye yesine yehora, isiphuzo singahlungwa bese sithathwa uhhafu wengilazi ngaphambi kokudla.
Isipuni se-aronia exutshwe nenani elilinganayo le-hawthorn ne-mint. Phikelela nengxenye yelitha lamanzi abilayo. Thatha isigamu sengilazi ngaphambi kokudla, kathathu. Isiphuzo asinawo nje umphumela we-hypotensive, kodwa futhi siqinisa amasosha omzimba, ngoba sinenani elikhulu lamavithamini ekwakhiweni kwawo.
Enye isiphuzo se-Vitamin ne-antihypertensive yi-decoction elungiselelwe ngesisekelo sama-raspberries kanye ne-mint. Ingilazi yamanzi abilayo ithatha isipuni samajikijolo kanye nesipuni sikamatende. Thatha ingilazi ngosuku, amahlandla amabili noma amathathu.
Njengomenzeli we-hypotensive, ungasebenzisa futhi ingxube ye-tinctures yotshwala ye-mint, peony, valerian, eucalyptus kanye ne-mamawort. Zonke izinto zihlanganiswa ngokulingana futhi zithathwa ngesigamu sesipuni kathathu ngosuku ngaphambi kokudla.
Ngaphambi kokusebenzisa noma yiziphi ama-decoctions we-herbal kanye nama-tinctures, kunconywa ukubonana nodokotela.
I-Peppermint kawoyela obalulekile we-hypertension
Amafutha abalulekile e-Peppermint ayikhambi eliphumelelayo elilinganayo lomfutho wegazi ophezulu.
Zisetshenziselwa i-acupressure ngesikhathi sokuqala komfutho wegazi ophezulu. Amafutha asetshenziswa ezindaweni zokwelashwa bese ezihlikihlwa ngokunyakaza okuhlanganisa imizuzu emihlanu.
Ngosizo lwamafutha abalulekile we-mint, i-aromatherapy ingaqhutshwa, nayo ezoba nomphumela omuhle ekucindezelweni.
Ngesikhathi sokugeza, ungangeza namaconsi ambalwa wamafutha. Ama-vaporiyumu abalulekile ento angena ngaphakathi futhi enze itayitela lemikhumbi lijwayelekile.
Izici zokupholisa itiye le-mint
Ingabe iminti inyuka noma yehlise ingcindezi? Sesivele sisebenzene nalolu daba, ngakho-ke kufanele wazi ukuthi ungaluthatha kanjani ngokufanele. Inketho enhle kakhulu ngukuphisa itiye ngalesi sitshalo. Ukuze wenze lokhu, kungcono ukusebenzisa amaqabunga amasha ngenani lezicucu ezimbili noma ezintathu, ezithelwa ngamanzi abilayo futhi zibolile imizuzu eyi-10. Ungathenga futhi uminti owomile ekhemisi, okufanele ukhiqizwe isipuni esisodwa ngalinye.
Uma uphuza itiye nge-mint, ingcindezi ingancipha kakhulu, ngakho-ke kunconywa ukuyisebenzisa ngesikhathi sokuhlaselwa umfutho wegazi ophezulu. Ungaqhuba nenkambo yokuvimbela amasonto amabili, lapho kufanele uphuze khona isigamu sengilazi yetiye yeminti ntambama nakusihlwa. Kuyasiza kakhulu ukufaka ithisipuni loju engilazini yesiphuzo esinjalo, futhi uma usiphuza ngaphambi kokulala, khona-ke ukuqiniseka okuzolile nobuthongo obukhulu kuqinisekisiwe.
Ekushiseni okukhulu, abantu abane-hypertension bazizwa kabi kakhulu, itiye elipholile le-mint ngokufakwa kwesigaxa selamula kuphakamisa ukujula kwephimbo nomzimba jikelele. Futhi, itiye eluhlaza ene-mint yehlisa umfutho wegazi, ngakho-ke ukusetshenziswa kwayo njalo kusiza inhlala-kahle yeziguli ezinesifo somfutho wegazi. Kepha ukuphuza izingilazi ezingaphezu kwezine ngosuku akunconywa.
Iminti ingaba yingozi uma isetshenziswe ngendlela engafanele. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi lesi yisitshalo sokwelapha esingafanele ukuhlukunyezwa. Uma uyithatha ngemithamo emikhulu njenge-choleretic ne-diuretic, khona-ke ukuphuma komzimba kungenzeka.
Owesifazane okhulelwe kufanele athathe le khambi elimnandi ngokunakekelwa, futhi ngesikhathi sokuqunjelwa, iminti isiza ukunciphisa inani lobisi. Amadoda nawo awathandeki ukuyisebenzisa kumthamo omkhulu, ngoba isitshalo sinomthelela ngemuva kwesizinda se-hormonal.
Nasi isitshalo esimangalisa kangaka - iminti, izinzuzo nokulimazeka esikuhlolile. Kuzoba wusizo kuphela uma ulisebenzisa kumthamo onconyiwe. Futhi lapho ubuzwa ukuthi i-peppermint inyusa noma yehlisa umfutho wegazi, kuphephile ukuphendula ukuthi kuyanciphisa, futhi impela kakhulu. Ngakho-ke, kunqatshelwe ngokuphelele kuma-hypotensives.
Izinzuzo ze-peppermint zomzimba
I-Peppermint iqukethe izinto ezibaluleke kangaka kubantu njengama-tannins, ama-flavonoid, ama-menthol, ama-organic acid nezinye izinto ezincanyana kanye nama-macro.
Ngenxa yokwakheka kwawo, isitshalo sokwelapha sinomphumela olandelayo emzimbeni womuntu:
isiza ukuqinisa izindonga zemithambo,
ikhulula umsipha wemithambo yegazi,
kuthuthukisa ukuqina nokuqina kwemithambo yemithambo nemithambo,
Kwejwayelekile ukushaya kwenhliziyo
kuvimbela ukwakheka kwama-atherosselotic plaque,
Ama-flavonoid anciphisa ukuqina kwezindonga zemithambo yegazi,
ibuyise ithoni yemithambo,
kuqeda inqubo yokuvuvukala.
I-Mint futhi inikeza umphumela we-heestatic.Isitshalo sibuye sibe neminye imiphumela ezuzisayo: sedative, ngcono immune immune, sithuthukisa izinqubo ze-metabolic.
Kungakho i-mint isetshenziswa ekwelapheni izifo eziningi, kufaka phakathi lezo ezihambisana nokuphulwa kwengcindezi.
Ukuthi mint kuthinta kanjani ingcindezi
Iziguli eziningi ezazi ngezimangaliso ze-mint zinentshisekelo kulo mbuzo: ingabe ziyakhuphuka noma zehlise ingcindezi?
Ukwakheka kwesitshalo kufaka i-menthol. Le ngxenye inomphumela we-vasoconstrictor emzimbeni. Ngenxa yalokho, i-peppermint inciphisa ingcindezi. Ngakho-ke, ochwepheshe batusa ukusetshenziswa kwezitshalo ekwelapheni umfutho wegazi ophezulu.
Nge-hypotension, ukusetshenziswa kwemali esekwe kule imbiza kufanele kube nomkhawulo.
Izinhlobo zeminti nokukhetha kwayo
Kunezinhlobo eziningi zeminti:
Zonke lezi zinhlobo zezitshalo zisetshenziswa kwezinye izindlela zokwelapha.
Nge-hypertension, i-peppermint, enezinto zokwelapha, iyasiza. Njengomuthi, kusetshenziswa i-balm ye-lime, edume ngokuthi yi-mandimu ka-lem.
Ekwelashweni ngokucindezela okukhulu, kusetshenziswa omabili amaqabunga otshani namaqabunga owomile. Ukusetshenziswa kwe-peppermint kawoyela obalulekile kukhonjisiwe nezifo eziningi.
Ungayithatha kanjani ingcindezi ephezulu
Ngenxa ye-vasodilating, antispasmodic and soothing effect, imikhiqizo ye-peppermint isetshenziswa emithini yesintu ukwelapha umfutho wegazi ophakeme.
Ngomfutho wegazi ophakeme, le mithi yeminti isiza:
ukumnika ngendlela yayo emsulwa noma ngokufakwa kwezinye izitshalo zokwelapha.
Kwezinye izimo, kuhle ukudla amaqabunga aluhlaza.
Ukunciphisa ingcindezi, kungcono ukusebenzisa itiye le-mint. Kuhle ukuthi iziguli ezinomfutho wegazi ziliphuze ukushisa. Ungangeza isiphu sikalamula noma uju kuso. Itiye elinjalo lithathwa ukuvikela umfutho wegazi ophakeme.
Usuku, udinga ukuphuza itiye le-mint ngesibalo esingekho ngaphezu kwengilazi ezintathu.
Amafutha e-Peppermint asetshenziselwa i-acupressure ye-aromatherapy. Iphinde yengezwe kubhavu ukuze wenze ingcindezi ibe yakhona.
Ngaphambi kokusebenzisa izidakamizwa esitshalweni, bonana nochwepheshe mayelana nokufaneleka kokuzisebenzisa.
Ukusetshenziswa kwengcindezi ephansi
Nge-hypotension, ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezenziwa nge-peppermint kufanele kukhawulelwe. Ukusetshenziswa kaningi kwetiye namanye amakhambi anjalo nesitshalo kungaholela ekwandeni kwesimo kanye nokuvela kwezinkinga zempilo.
Ukulungisa ithoni ye-vascularise, itiye le-mint lingadakwa ezigulini ezi-hypotonic kungadluli kanye ngosuku.
Ukusetshenziswa kweminti ukwenza kube ngokwejwayelekile ukucindezela kwegazi ngesikhathi sokukhulelwa
Ochwepheshe beluleka ukwenqaba ukusebenzisa imishanguzo ngesikhathi sokuzala ingane.
Kodwa-ke, abesifazane abakhulelwe bavame ukukhulisa ingcindezi ngenxa yesikhundla sabo "esithandekayo". Ukuze usebenzise izidakamizwa kaningi, ngesikhathi sokukhulelwa uvunyelwe ukufaka amaqabunga ama-mint eweni.
Ukuze usilungiselele, udinga ukuthatha iqabunga elomile lesitshalo enanini lezipuni. Ufakwa engilazini yamanzi abilayo cishe imizuzu eyi-15. Bese uhlunga.
Ngale njongo, ungasebenzisa amaqabunga amasha. Ukwenza itiye badinga okuncane, izingcezu ezimbili noma ezintathu nje.
Ukuze uyilungiselele, uthele izipuni ezimbili zamaqabunga amasha nge-litre yamanzi bese ubilisa ukushisa okuphansi cishe imizuzu eyishumi. Faka kuze kube yilapho umhluzi uphola.
Ukulungiselela leli khambi, uthele isipuni seqabunga elomile noma isipuni samanzi aluhlaza enkomishini yamanzi abilayo. Kuyadingeka ukugcizelela umuthi okungenani amahora amabili.
Ungadliwa ngama-mint namanye amakhambi ngenxa yomfutho wegazi ophezulu
Kwelinye ikhambi, izidakamizwa eziningi ezisuselwa ku-mint nezinye izitshalo zokwelapha ze-hypertension ziyasetshenziswa:
Umhluzi ngama-raspberries. Isipele kanye ithisipuni lamaqabunga ama-mint omisiwe ayabiliswa, izithako zibilisiwe imizuzu eyishumi, bese ziyagcizelelwa.
Ukumiswa kwe-mint nge-hawthorn ne-chokeberry. Thatha izithako ngokulingana okulinganayo bese uthela amanzi abilayo. Faka umuthi okungenani ihora elilodwa. Kunconywa ukuthi udle isigamu senkomishi ngaphambi kokudla kathathu ngosuku.
Mint umhluzi nge-balm kalamula. Isipuni sezinto zokwelapha ezingavuthiwe sitshelwa ngamanzi abandayo bese sibiliswa phezu komlilo ophansi imizuzu eyi-15. Ngemuva kokupholisa, umhluzi uyahlungwa.
Ukumfaka ngokufakwa kwamaqabunga e-currant. Izinto ezingavuthiwe ezingxenyeni ezilinganayo zithululelwa ngamanzi abilayo futhi zifakwa cishe isigamu sehora. Ukuphuza kunconywa imizuzu engama-20 ngaphambi kokudla kathathu ngosuku.
I-Chamomile mint itiye. Thatha izithako ngokulingana okulinganayo. Baxubene nengxenye yezimpande ze-valerian. Ukuqoqwa kufanele kuthululwe ngamanzi abilayo futhi kugcizelelwe imizuzu eminingana. Sebenzisa inkomishi kathathu ngosuku ngaphambi kokudla.
Ukufakwa kwe-adonis, peppermint, oregano ne-astragalus. Izitshalo zomile futhi zinomhlabathi. Kutholakala isipuni sokuqoqa isitsha esingama-litre amanzi abilayo imizuzu engama-30. Phuza amagremu ayi-100 ngaphambi kokudla.
Ukumenywa kusuka ekuqoqweni kwe-adonis, peppermint, hawthorn kanye ne-mamawort. Kufanele uthathe isipuni sesitshalo ngasinye uhlanganise. Iqoqo elizophuma lizodingeka lomuthi amagremu angama-30. Ingxube ithululelwa ngamanzi abilayo, ifakwa isigamu sehora bese ihlungwa. Phuza isigamu senkomishi ngenkathi udla noma ngaphambi kokudla.
Ezinye izindlela ezinezitshalo zokwelapha, isithako esiyinhloko sazo esingu-mint, futhi sinempahla esezingeni eliphakeme:
ngamajikijolo omisiwe we-viburnum,
ukukha kusuka kuminti, intshonalanga, i-hawthorn ne-valerian,
i-tincture yokuphuza utshwala i-peonies, i-mamawort, imint, i-eucalyptus, i-valerian.
Ngaphambi kokwelashwa nala ma-ejenti, ukubonisana nodokotela mayelana nokuthi kungenzeka ukusetshenziswa kwabo kuyadingeka.
I-Mint isiza ukukhulula ama-vasospasms kanye nekhanda ngekhanda lomfutho wegazi ophakeme ngenxa yokuqukethwe kwezinto ezinomphumela we-vasoconstrictor. Kodwa-ke, kubalulekile ukwazi ukuthi ungasisebenzisa kanjani kahle isitshalo ukwelashwa nokuthi yikuphi ukuphikisana okukhona ngokusetshenziswa kwaso.